Abakhiqizi bekesi lomcamelo & abahlinzeki - China Icala lomcamelo wecala lomqolo
I-Wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa i-home cushion511603
Umcamelo we-Hot-selling (Autumn) Embroidery wesandla we-DIY owenziwe ngesandla owenziwe ngendwangu usofa isiguqo se-European style embroidery material set, sebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngezandla ezintathu, isandla masenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa ekhaya isiguqo511605
Umcamelo Othengisa Okushisa Okushisa (Ubusika) Ubuciko be-DIY obufekethisiwe bendwangu yasendlini usofa isiguqo impahla yase-European isitayela efekethisiwe, sebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa ekhaya isiguqo511606
Umcamelo othengisa okushisayo (Plain as brocade) Embroidery DIY embroidery hand embroidery home fabric sofa cushion European style embroidery material set, use hand - made three-dimensional embroidery, ake isandla senze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa ekhaya isiguqo511607
Umcamelo Othengisa Okushisayo (Isikhathi Esimibalabala esinemibala) Imifekethiso ye-DIY efekethisiwe isandla efekethisiwe indwangu yasekhaya usofa isiguqo isitayela se-European style embroidery set set, sebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngamehlo amathathu, isandla masenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa ekhaya isiguqo511609
Umcamelo othengisa okushisayo (Iqhwa elilula kodwa elihle) Imifekethiso ye-DIY efekethisiwe isandla efekethisiwe indwangu yasekhaya usofa isiguqo seti yaseYurophu isitayela sezinto ezifekethisiwe, sebenzisa imidwebo eyenziwe ngezandla ezintathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa ekhaya isiguqo511608
Umcamelo Wokuthengisa Okushisayo (Ukuthula okulula kodwa okuhle) Imifekethiso ye-DIY efekethisiwe ngesandla indwangu yasekhaya usofa isiguqo seti yaseYurophu isitayela sezinto ezifekethisiwe, sebenzisa imidwebo eyenziwe ngezandla ezintathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa ekhaya isiguqo 511610
Umcamelo othengisa okushisayo (Inhliziyo elula kodwa enhle yenkuni) Imifekethiso ye-DIY efekethisiwe isandla efekethisiwe indwangu yasekhaya usofa isiguqo seti yaseYurophu isitayela sezinto ezifekethisiwe, sebenzisa imidwebo eyenziwe ngezandla ezintathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa ekhaya isiguqo 511611
Umcamelo Wokuthengisa Okushisayo (Iqoqo elilula kodwa elihle le-static) Imifekethiso ye-DIY efekethisiwe ngesandla efekethisiwe ekhaya indwangu usofa isiguqo isitayela se-European style embroidery set set, sebenzisa okwenziwe ngezandla ezenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa ekhaya isiguqo 511612
Umcamelo othengisa okushisayo (okulula kodwa okuhle) Okufekethisiwe kwe-DIY okufekethisiwe kwesandla indwangu yasekhaya usofa isiguqo impahla yase-European isitayela efekethisiwe, sebenzisa imidwebo eyenziwe ngakuthathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.
I-Wholesale embroidery flower design fashion yokuhlobisa imicamelo yokuphonsa ekhaya isiguqo 511613
Umcamelo Wokuthengisa Okushisayo (Okulula nenhle njengakuqala) Imifekethiso ye-DIY efekethisiwe ngesandla efekethisiwe indwangu yasekhaya usofa isiguqo seti yaseYurophu isitayela sezinto ezifekethisiwe, sebenzisa imidwebo eyenziwe ngezandla ezintathu, vumela isandla sikwenze ukuveza imizwa yakho. Izindwangu zekhwalithi ephezulu, ukuphrinta kwencazelo ephezulu, ukukhiqizwa okulula.